Decentrix Mediabase ဂါးဒီးယန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အချက်အလက်တိုင်းတာခြင်းကိုအသုံးပြုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Decentrix Mediabase ဂါးဒီးယန်းစီးပွားရေး Optimization ရိုးရှင်းဖို့မှာ Data အတိုင်းအတာအသုံးပြု
Decentrix Mediabase ဂါးဒီးယန်းစီးပွားရေး Optimization ရိုးရှင်းဖို့မှာ Data အတိုင်းအတာအသုံးပြု
Denver - သြဂုတ်လ 31, 2017 - Decentrix Inc ကိုယနေ့ Mediabase ဂါးဒီးယန်း (TM), ကုမ္ပဏီ၏မျိုးဆက်သစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း optimization နည်းပညာ၏လွှတ်ပေးရန်ကြေညာခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်များ Decentrix BIAnalytix (TM) မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, Mediabase ဂါးဒီးယန်းအချိန်အတွက်မဆိုပေးထားသောအချက်မှာ Workflows တိုင်းတာ, ဒေတာသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုသိမ်းသွင်း ထား. မှဒေတာများစုံစမ်းစစ်ဆေးကိုအသုံးပြုစနစ်များအကြားစီးဆင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်စဉ်ကိုတိုးတက်ဖွင့်ဖို့ဒီကို real-time သတင်းအချက်အလက် leverages ။
"မီဒီယာအဖှဲ့အစညျးအတှငျးရှိခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု workflow နှင့်အလေ့အကျင့်အလိုအလျောက်မယ့်အစား, Mediabase ဂါးဒီးယန်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဖှဲ့အစညျးကတစ်ဖွဲ့လုံးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုကောင်းအောင်နိုင်ရန်အတွက်ဖြေရှင်းရမယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့စေသည်," ဝိန်း Ruting, Decentrix မှာ CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းကလူတွေ, လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်နည်းပညာအကြားအပြန်အလှန်တိုင်းတာတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေလိုလျှင် "ထို့နောက်သူကလုံးလုံးလြားလြားက၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း optimized သိရသည်။ ဒီဆန်းသစ် optimization ပလက်ဖောင်းများ၏အကျိုးအတွက်အတူ, မီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသူတို့ကယ့်ကိုအစဉ်အဆက်ကိုထပ်ရိုးရာလုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်အားမလိုအပ်ရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ဖို့လာပါလိမ့်မယ်။ "
Mediabase ဂါးဒီးယန်းမော်နီတာနှင့် application စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ပေးသော Mediabase SQLInsight (TM), နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Workflows တိုင်းတာ, နဲ့ cloud အခြေခံအဆောက်အဦအရင်းအမြစ်တွေကိုပိုကောင်းအောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်များစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မြေပုံအရာ CloudMBI Sentinel (TM), အတူ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းအသွားအလာစွမ်းဆောင်ရည်ထင်ဟပ်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသော KPIs ရယူထားခြင်းမှမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအားဖွင့် - ဤနှစ်ခုဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ Mediabase ဂါးဒီးယန်းအပြည့်အဝစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမက်ထရစ်၏ဝယ်ယူ, စုစည်းမှုနှင့်ပုံမှန်အမှာစကားပြောကြားကြောင်းသမိုင်းများ၏ဗဟိုလုပ်ငန်း-based repository ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ခေတ်မီဆန်းပြားဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ပုံရိပ်ယောင်လူများ, လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်နည်းပညာ၏ထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းကြားကြောင်းအသိအမြင်ကိုဆက်ကပ်။
တစ်ခုလုံးကို Decentrix BIAnalytix ထုတ်ကုန်အစုစုကိုစိမ်သော Open-ဗိသုကာဒဿနမှကျေးဇူးတင်ပါသည် Mediabase ဂါးဒီးယန်းခေတ်သစ် desktop နဲ့မိုဘိုင်း application များနှင့်အတူအလွယ်တကူပေါင်းစပ်။ အဆိုပါ Decentrix နည်းပညာနှင့်အတူ Mediabase ဂါးဒီးယန်း၏ပေါင်းစပ်နှင့်အဓိကအကြောင်းရင်းအပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမတိုင်ပင်, မိုဃ်းတိမ်၌, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးစပ်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းကအဆက်မပြတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်ကိုလိုအပ်ချက်များကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ရဲ့ယနေ့အလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်သည်ကိုသေချာ။
"မီဒီယာအဖှဲ့အစညျးအတှငျးရှိမန်နေဂျာများနှင့် IT န်ထမ်းများဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်အားပြုပြင်တာတွေစိုးရိမ်ရန်မလိုချင်ကြဘူး, သူတို့ပဲအမှုအရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတလွှားအလုပ်လုပ်လမ်းကို fix ချင်, "Ruting ကဆက်ပြောသည်။ "Mediabase ဂါးဒီးယန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမတတ်နိုင်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရပ်တန့်နှင့်အမှန်တကယ်အရေးကြီးပါတယ်အရာကိုရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ "
Mediabase ဂါးဒီးယန်းနှင့် ပတ်သက်. ဖြည့်စွက်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.decentrix.net/bianalytix/products/mediabase-guardian.html ။
Decentrix နှင့်ကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာအကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.decentrix.com.
Decentrix အကြောင်း (www.decentrix.com)
Decentrix မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကြော်ငြာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင့်ကြောင်းပြည့်စုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်း analytics ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ Decentrix စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်အဲဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုသောလက်ဝါးကပ်တိုင်မီဒီယာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်များအတွင်းအရေးပါသောဒေတာများကိုဖော်ထုတ်နှင့်အကျယ်ချဲ့စာရင်းစျေးနှုန်းလိုက်လျောကြောင်းအသိအမြင်, ပိုကောင်းပရိသတ်ကိုတန်ဖိုးများအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီး optimized လှုပ်ရှားမှုများကယ်နှုတ်တော်မူ။ မီဒီယာလုပ်ငန်းကိုစနစ်များအတွက်အတွေ့အကြုံဆယ်စုနှစ်နှင့်အတူနည်းပညာသမားတို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Decentrix အစွမ်းထက်ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည် - အဓိကအကြောင်းရင်းအပေါ်, မိုဃ်းတိမ်၌၎င်း, တစ်ဦးစပ်ပလက်ဖောင်းအဖြစ် - ကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများသည်အရေးပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချအတွက်နေ့စဉ်ခိုလှုံပါ၏။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.decentrix.com.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/Decentrix/170831Decentrix.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Decentrix/Decentrix-Mediabase-Guardian.jpgPhoto caption: Mediabase ဂါးဒီးယန်း (TM) (စမ်းသပ်ဖို့ဒေတာနှင့်အတူ Not Configured ကို) ၏တစ်ဦးကမျက်နှာပြင် Shot
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/tweet?text=Will%20media%20businesses%20need%20traditional%20workflow%20ever%20again%3F%[အီးမေးလျ protected]%20announces%20Mediabase%20Guardian.%20-%20https://goo.gl/bmbtLm
BIAnalytix စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Optimization ဒေတာကိုတိုင်းတာခြင်း Decentrix Decentrix Mediabase ဂါးဒီးယန်း မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ Mediabase virtual reality 2017-08-31
ယခင်: Sonnet Lightning-Fast Fusion Thunderbolt 1 PCIe Flash ကို Drive ကို၏ 3TB ဗားရှင်းဦးလွတ်မြောက်
နောက်တစ်ခု: ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိ (Lateral / အကယ်ဒမီဘွဲ့လွန် ...